Madaxweynayaasha Maamul Gobaleedyada Puntland iyo Jubaland oo qaaday tallaabo ka dhan ah guddiyada doorashada | Warkii.com
Home warkii Madaxweynayaasha Maamul Gobaleedyada Puntland iyo Jubaland oo qaaday tallaabo ka dhan ah...
Madaxweynayaasha Maamul Gobaleedyada Puntland iyo Jubaland oo qaaday tallaabo ka dhan ah guddiyada doorashada
Madaxweynayaasha Maamul Gobaleedyada Puntland iyo Jubaland ayaa wali soo magacaabin guddiyada doorashada 8-da xubnood ah ee heer dowlad gobaleed, kuwaas oo qeyb ka ah guddiyada doorashooyinka qaranka iyo kuwa heer dowlad gobaleed.
Axmed Maxamed Islaam “Madoobe” iyo Saciid Cabdullaahi Cabdullaahi Deni, ayaa lagu wadaa in ay shir gaar ah arintaan ka yeeshaan islamarkaana ay qaataan go’aankii ugu dambeeyay ee guddiyada ku dhiman.
Xildhibaano ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya iyo masuuliyiin ku dhow dhow maamulada Puntland iyo Jubaland ayaa Warkii.com u sheegay in Axmed Madoobe iyo Saciid Deni ay diidan yihiin sida ay hadda u socoto diyaar garowga doorashada Soomaaliya, gaar ahaan qaab loo maray dhismaha guddiyada Farsamada iyo Xallinta Khilaafaadka ee doorashooyinka Soomaaliya.
Madasha Xisbiyada Qaran, Xisbiga Wadajir, siyaasiin iyo musharaxiin badan oo taagan qabashada Xilka Madaxweynaha Soomaaliya, ayaa hore u diiday guddiyada doorashooyinka Qaranka iyo kuwa heer dowlad goableed, waxeyna sheegeen in ay ku jiraan Shaqaale Dowladeed, Saraakiil ka tirsan NISA, xubno ka tirsan xafiiysada Madaxweynaha iyo Ra’iisul iyo qaar kamid ah taageerayaashii Madaxweyne Farmaajo ee baraha bulshada.
Machad-ka Cilmi baarista ee Heritage ayaa maalin ka hor warbixin uu saaray ku sheegay in guddigaan uusan aheyn mid dhex dhexaad ka noqon kara doorashada Soomaaliya waxeyna ku taliyeen in la badalo.
Si kastaba, lama oga go’aanka ay Villa Somalia ka qaadan doonto cabashada ka dhanka guddiyada doorashooyinka Soomaaliya, inkasta oo ay u badan tahay inaysan marnaba dhageysan, maadaama taasi ay tahay wax aan looga baran.
Haddii ay ku adkeystaan Axmed Madoobe iyo Deni inaysan soo magacaabin guddiyada waxay halis gelineysaa in doorashada ay waqtigeeda ku dhacdo.
Previous articleAskari ka tirsan ciidamada DF oo dilay gabar uu kala dhexeeyey xiriir Jaceyl
Next articleDaahir Gelle: Arrin aan laba sano ka hor Farmaajo ka diiday ayuu hadda wasiir Dubbe ka yeelay
Dagaalka u dhexeeya ciidanka Itoobiya iyo jabhadda xoreynta shacabka Tigray waxa uu u muuqdaa mid siisoconaya, ciidanka dowladdu waxa uu sheeganayaa in uu horumar...